Accueil > Gazetin'ny nosy > Jeneraly Fidy, Noel, Baomba : Ny zava-miafin’izy ireo
Jeneraly Fidy, Noel, Baomba : Ny zava-miafin’izy ireo
Manamboninahitra jeneraly teo anivon’ny tafika tsy zoviana amin’ny malagasy tato anatin’ny 20 taona farany ny Jeneraly Ravalomanana Richard antsoina hoe «Jeneraly Baomba» sy ny Jeneraly Andrianafidisoa (Jeneraly Fidy) ary ny Jeneraly Rakotona-ndrasana Noel. Ny Jeneraly Baomba dia sekreteram-panjakana nisahana ny zandary farany teo ary nalaza hatramin’nty niakaran-dRajoelina teo amin’ny fitondrana tamin’ny 2009. Fantatra tamin’ny raharaha 2009 koa ny Jeneraly Noel Rakotonandrasana ary izy mihitsy moa no voatendry ho minisitry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fitondrana tetezeamita. Ny Jeneraly Andrianafidisoa indray dia izy nampahomby ny fakan’ny vahoaka ny lapan’ny Faritany tao Andoha-natady Fianarantsoa tamin’ny hetsi-bahoaka 2002 no nanomboka nampahalaza azy.
Ny fahafatesan’ny Jeneraly Noel dia voambara fa « maty natelin’ny rano tany Betsiboka raha namonjy ireo olona navadiky ny botry ». Ny Jeneraly Fidy indray, izay vao maty tamin’ny herinandro lasa iny, dia voalaza fa « matin’ny lozam-pifamoivoizana tamin’ny môtô ». Samy tsy marina ireo, hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny tafika. Miandry ny fivoahan’ny tena voka-panadihadiana fa hamoaka ny marina izahay, hoy ny eo anivon’ny tafika, fa raha toa ka amboamboarina ny amin’ny filazana fa antony marina nahafaty azy ireo dia ho avy izahay.
Ny Jeneraly Baomba indray dia tsikaritry ny mpanara-maso fa mivezivezy matetika ao amin’ny lapan’ny Antenimieran-doholona ao. Re àry fa mitetika ny hotendrena Loholon’i Madagasikara hasolo ny toeran’ny Minisitra Imbiky Herilaza izy, izay loholona teo aloha, ary ny haka ny toeran’ny Filohan’ny Anteni-mierandoholona, hasolo an-dRazafimahefa Herimanana no tena tanjona. Misy amin’ireo ao amin’ny Birao maharitr’ity andrim-panjakana ity no efa mirona any amin’io fampakarana ny Jeneraly Ravalomanana Richard ho olona faharoa eto amin’ny tany sy ny fanjakana io. Tsy tranga madinidinika izany rehetra izany fa avo lenta ary tena saro-pady satria voasaringotra ny tontolon’ny tafika sy ny zandary. Manara-maso isika.